Sirta fasax qoys oo aad u fiican waa marka qoyska oo dhami saaran yahay oo ay ku faraxsan yihiin. Yurub waxaa ka buuxa astaamo cajaa’ib leh, soo jiidashada, jardiinooyinka madadaalada, iyo meelaha la booqdo, iyo in caruurtaadu kaqeybqaataan qorsheynta safarkaaga Yurub waxay isu rogi doontaa fasax riyo ah. Hore u sii baaritaankaaga, dooro soojiidashada aad rabto inaad booqato, iyo dhibco carruurtaadu jeclaan lahaayeen, ka dibna ay caruurtu wax doortaan 3-4 soojiidashada liiska. Qaabkan qof walba wuu ku faraxsan yahay oo wuxuu leeyahay wax maalin walba laga sugayo.
Waxaad kaligaa ku sameyn kartaa khariidad iyo buugaag iyo barnaamijyo, laakiin ku biirida doonta ama socdaalka socodka ayaa ugu fiican. Inta badan magaalooyinka Yurub waxaa ka jira dalxiisyada socodka magaalada oo bilaash ah oo leh hage maxalli ah. Tilmaamahan farxadda leh ayaa tusi doona oo sheegi doona sirta magaalada ee sida fiican loo ilaaliyo, adigoon ku lumin dariiqa jidadka. Tilmaamuhu wuxuu sidoo kale tilmaami doonaa makhaayadaha maxalliga ah oo leh qado go'an isla markaana wuxuu bixin doonaa talooyinka ugu fiican ee ku saabsan waxa magaalada lagu qabanayo.
Inta badan magaalooyinka Yurub waxay ku yeelan doonaan carousel dhalaalaya oo qurux badan gudaha barxadda magaalada ugu weyn. Halkii aad ugu ordi lahayd barta xigta, joogso, oo u oggolow kiddos inay raacaan inta ay rabaan. Ku raaxeysiga raacitaanka gawaarida markii Eiffel Tower uu kaa hooseeyo gadaashaada, waa xilli xusuus mudan socod baradka iyo dadka waaweyn.
Ma rabtaa inaad ku dhajiso bartayada "10 Talooyin ee Ugu Fiican ee Fasaxa Qoyska ee Yurub" boggaaga? Waxaad ka qaadi kartaa sawiro iyo qoraal iyo na siiso credit la link a si post blog this. Ama guji halkan: https://iframely.com/embed/https://www.saveatrain.com/blog/tips-family-vacation-europe/?lang=so የሰማይ አካላት- (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)